PressReader - Ilanga: 2018-11-22 - Sithini isanusi sezemfashini ngo-2019?
Sithini isanusi sezemfashini ngo-2019?
Kusetshenziswa ama-goddess ukuhlaziya imfashini
Ilanga - 2018-11-22 - Impilo -
goddess) I-BABOUCHE izingubo ezinde nezicathulo ezi- flat ezimise okwe- babouche - okuyizicathulo ezikhonzwe kakhulu ngabesifazane benkolo i-Islam. Ingubo ezodla ubhedu yi- sack dress noma yishethi elivulekile ngezansi elihambisana nebhande lendwangu. Kokokuhloba uthi ama- ribbon azokhuza ibuya kanjalo namacici angama- clip on nawo azongenisa. Yize le goddess ikhonze imibala ezothile kodwa enye ezongenisa ngoluhlaza sa- avocado newasabi.
Le goddess ishaya umshoshaphansi. Ingowesifazane osemncane ngokomoya okhonze ukuba ngunontandakubukwa wezinkundla zokuxhumana. “Ayeneme ngokuphelele emoyeni ngoba ayizazi ukuthi impilo yayo ibhekephi. Ihlezi izingela i- prince no-sugar daddy ozoyikhipha osizini. Ikhonze ubucwebe nezicathulo kanti ithanda izindwangu ezihambelana kahle nesikhumba, ezinemibala engagqamile njengo- pink no- violet. Ngenxa yokuthi ichitha isikhathi sayo esiningi ishaya umshoshaphansi, igangile injalo nje yingakho isitayela sayo ngesinye isikhathi sizoveza ukuba punky.
Lena ikhonze imibala egqamile, ama- fringe nama- pom pom. Iphinde ikhonze ubuciko obakhiwe ngesandla njangama- knit ne- embroidery.
Uthi uma sibheka isimo senhlalo jikelele, sekunokwesaba novalo yonke indawo. Ngenxa yalesi sizathu, ikhaya yiyona ndawo umuntu okumele azizwe enethezekile kuyona - yize nakho kungeke kuqinisekise ukuthi uzowuthola lowo muzwa ngenxa yengcindezi ethinta ezezimali nangezindaba ezimbi zepolitiki nokubulawa kwabantu esizibuka kuma-tv nizilalele nakuma- radio.
Uthi ama- trend awabona engenisa ezindlini ahambisana nemibala e- dark, ikakhulukazi emakhishini, e- toilet nase- bathroom.
Ema- bathroom uthi ngeke kusaba khona udonga olwehlukanisayo, sekuzoba yi- bathroom ehlanganiswe ne- shower. Emagunjini okuphumula uthi ngeke besadlisa obhazabhaza
bosofa abagcwala indlu yonke kodwa sekuzodlisa amatafulana amancane nezitulo. Konke lokhu kuthiwa kuzobe kudlisa ngendwangu ye
ULIDEWIJ Edelkoort, odume ngelikaLi, ongumbhali aphinde abe ngumgcini wamagugu ohlonishwayo waseDutch uzakhele udumo lokuba yisanusi sama-trend. izithombe ngabe
ISIBONELO esihle se-goddess engu-Oshun ngumculi uBeyonce njengoba ekukhonzile ukushutha izithombe ezibukelwe kule ndlovukazi.
IZONGENISA indwangu ye- ngonyaka ozayo ngisho kosofa.
ENYE yemibala ezongenisa ngo2019 ngoluhlaza sa-avocado newasabi kanti nefringe izongenisa.